Fanodinkodinam-bary BNGRC : Lasa nandositra ilay mpitatitra -
AccueilRaharaham-pirenenaFanodinkodinam-bary BNGRC : Lasa nandositra ilay mpitatitra
Fanodinkodinam-bary BNGRC : Lasa nandositra ilay mpitatitra
11/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Voatery nandositra niala an’i Madagasikara ilay tompon’ny orinasa fitaterana iray taorian’ny fanodinkodinam-bary aman-jato taonina tao amin’ny BNGRC. Ny antony, matahotra ny ainy izy araka ny vaovao azo satria lasa vavolombelona tsy fidiny teo anatrehan’ny zava-nitranga. Ireo mpiandry magazay kely tsy mahalala izay ambonin’ny tany tokoa mantsy no migadra amin’izao fotoana izao fa ireo tena “trondro vaventy” tamin’ity raharaha ity milamin-damina tsara any amin’izay misy azy any.
Efa tafiditra tsara ao anatin’ny vanim-potoanan’ny fahavaratra isika ary efa manomboka betsaka ny rotsak’orana. Ho fiatrehana ireny loza voajanahary ireny no andraikitra ny BNGRC kanefa dia izao nisy nandonkodina izao ny vary aman-jato taonina. Tsy vitan’izany fa lasa lasibatra ho azy amin’ny tsy misy dikany ny olona sasany, tahaka ity mpitatitra ity izay voatery nitsoaka ivelan’i Madagasikara kanefa tsy nanao afatsy ny nitatitra ireo vary ireo, izay rahateo koa no asany. Mazava ho azy fa ity mpitatitra ity no tena afaka mitondra fanazavana sy manome antsipirihany bebe kokoa momba ny toerana sy ny olona nanaterana ny vary rehefa nivoaka tao amin’ny magazay. Izy izany no antsoina hoe “vavolombelona manelingelina” amin’ity raharaha ity ka dia naleony niala lavitra ndrao sanatria…
Raha mba vary iray gony mantsy no nivoaka avy tao amin’ilay magazay fitehirizan’entan’ny BNGRC mbola azo eritreretina hoe halatra tahaka ny halatra rehetra ihany. Fa 270 T be izao ve dia mbola hisy hiteny ihany hoe tsy nisy firaisana tsikombakomba teo anivon’ny tomponandraikitra ambony ao amin’ity birao misahana ny loza voajanahary ity? Tsy maintsy nisy sonia ohatra ny taratasy namoahana ireo vary ireo. Dia iza io olona nanao sonia io? Saika nanaovana inona ny vola azo tamin’ny vidin’ireo vary 270 T ireo? Ilàna valiny avokoa izany fanontaniana rehetra izany.
Mazava ny resaka. Nifamahofaho be ihany mantsy ny resaka fisamboran’ny Bianco an’i Claudine Razaimamonjy, tompon’ny Hotel A&C eny Ivato, ny alatsinainy 3 Avrily lasa teo, tetsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Nitondra fanazavana mahakasika izay indrindra ...Tohiny
SEMPAMA : Mitaky vahaolana amin’ireo depiote 73
UCTU : Mampihorohoro ny vahoaka